Isilikhi Ukugcina Ababulali, Ukulinganisa Umntu, iGreen Man Rapists
Ummangali waseBoston wasebenza kwiBoston, iMisa. Ngomnyaka weminyaka emibili kwiminyaka yama-1960. I-"Silk Stocking Murders" yenye i-epithet enikezelwa kwicandelo elifanayo lolwaphulo-mthetho. Nangona u-Albert DeSalvo evuma ukubulala, ezininzi iingcali kunye nabaphandi abanokungabaza malunga nokubandakanyeka kwakhe kwizenzo zolwaphulo-mthetho.
Kwindawo yaseBoston, ukuqala ngoJuni 1962 kwaye iphelile ngoJanuwari 1964, abafazi aba-13 babulawa, ngokukodwa ngokucatshiswa.
Uninzi lwamaxhoba lufunyenwe kunye nee-nylons zazo ziboshwe ngeenyawo ezininzi entanyeni yazo kwaye ziboshwe ngesaphetha. Ukubulawa kwavela ngokuphindwe kabini kwinyanga kunye nomphefumlo omfutshane ukususela ekupheleni kukaAgasti ukuya kwiveki yokuqala kaDisemba 1982. Amaxhoba aphakathi kweminyaka eyi-19 ukuya kwe-85 ubudala. Bonke bahlaselwa ngokwesondo.
Uninzi lwamaxhoba lalingabomfazi abangatshatanga abahlala kwiindawo zokuhlala. Akukho mqondiso wokuphula kunye nokungena kwacaca kwaye abaphandi banqunyulwa ukuba amaxhoba ayazi umhlaseli wabo okanye ukukhwabanisa kwakhe kwakunengqondo ngokufanelekileyo ukuba amvumele ukuba angene ngaphakathi kwendlu.
Ngo-Oktobha ka-1964, elinye ibhinqa labika ukuba indoda ebiza ngokuba ngumcuphi wambopha embhedeni wayo waza waqala ukudlwengula. Ngokukhawuleza wayeka, waxolisa, washiya. Ingcaciso yakhe yanceda amapolisa ukuba afumane uDeSalvo njengomhlaseli. Kwafika amakhosikazi amaninzi ukumangalela ngokubambela xa umfanekiso wakhe ukhutshwa kumaphephandaba.
UAlbert DeSalvo - Ubuncinane Beminyaka Abantwana
U-Albert Henry DeSalvo wazalelwa e-Chelsa, eMisa. NgoSeptemba 3, 1931, kwintata eyayibetha kwaye yaxhaphaza umfazi wayo nabantwana. Ngexesha eli-12 ubudala, wayebanjelwe ukuphanga nokuhlaselwa kunye nebhetri. Wathunyelwa kwisibonelelo sokulungiswa konyaka kangangokuba wasebenza njengenkwenkwe yokuhambisa xa ekhululwa.
Ngaphantsi kweminyaka emibini wabuyiselwa kwisibonelelo sebabi bemoto.
Emva kwesibini, wajoyina umkhosi waza waya eJamani apho wadibana nomkakhe. Wayehlonishwa ngokungahloneli umyalelo. Wabuya wabuya wamangalela waza wityholwa ngokunyelisa intombazana eneminyaka engama-9 ubudala ehleli e Fort Fort. Abazali benqabile ukunyusa amacala kwaye waphinde wabukelwa ngokufanelekileyo.
Emva kokuphuma kwakhe ngo-1956, wabanjwa kabini ngokuphanga. Ngo-Matshi ka-1960, wabanjwa ngenxa yokuqwengula kwaye wavuma ukuba "ulwaphulo lomntu". Wayeya kubafazi ababukeka bekhangeleka njengendlela yokumisa imodeli kunye nokuhlambalaza amaxhoba phantsi kobuqhetseba bokuthatha imilinganiselo nge-tape measurer. Kwakhona, akukho ntlawulo zafakwa kwaye wachitha iinyanga ezili-11 kwi-burglary charge.
Emva kokukhululwa uDeSalvo kuthiwa waqala ulwaphulo-mthetho lwakhe oluthi "uMntu oLuntu" ngenxa yokuba wayegqoke ngokuluhlaza ukuze enze ukuhlaselwa ngokwesondo. Uthiwa wadlwengula abangaphezu kwama-300 amabhinqa (amaninzi anesithandathu ngosuku) emine ithi kwiminyaka emibini. Wabanjwa ngoNovemba ka-1964, ngenxa yeli dlwengulo waza wabuyiselwa esibhedlele saseBridgewater State ukuze ahlole.
Elinye ibanjwa, uGeorge Nassar, waphendukela kwiDeSalvo kubaphathi njengeBoston Strangler ukuze baqokelele umvuzo owawunikezelwa ngolwazi malunga nokubulala okulondoloziweyo.
Kwafunyaniswa kamva ukuba uNassar noDeSalvo benza isivumelwano sokuba inxalenye yemali yomvuzo izothunyelwa kumfazi kaDeSalvo. UDeSalvo wavuma ukubulala.
Iingxaki zenzeka xa kuphela umntu osinda kwiBoston Strangler ehluleka ukuchonga uDeSalvo njengomhlaseli kwaye wagxininisa ukuba uGeorge Nassar nguye owahlaselayo. UDeSalvo akazange akholwe naluphi na lo bulala. Ummeli owaziwayo uFee Lee Bailey wammela kwi-Criminal Man elwafunyaniswa netyala kwaye wafumana isigwebo sokuphila.
UDeSalvo wahlaselwa ngamanye amabanjwa eWalpole Prison ngo-1973.
I-Synopsis ye-Sleeping Beauty Ballet
Iprotheni kunye noLwakhiwo lwePolpeptide
I-Alloy Definition, Imizekelo, kunye neZisebenzisi